Indlela yokubhala | Isikhokelo sopelo kwi-Tdk kwi-Intanethi
Kwindawo yentengiso, i -k
Ubugcisa bokubhala kakuhle buyitalente buqu. Indlela yokubhala Phakathi kwamawaka amagama esiwacelayo, kukho amagama amaninzi azele iimpazamo zokupela esaziyo ziyinyani. Kule mihla, kwiilwimi ezininzi, amagama apelwe ngokungachanekanga kwaye ngelishwa abantu abaziboni ezi mpazamo.
Kwangelo xesha, siyababhida abantu abanezithethantonye, ​​xa igama linentsingiselo engaphezulu kwesinye kunye nentsingiselo, ngakumbi abantu abaphambi kwethu abanokusiqonda kwaye ngelishwa sinokunika imiyalezo engeyiyo komnye umntu.
Ungabona upelo oluchanekileyo lwamagama ozibuza ukuba ungawapela njani kwindawo yethu kwaye unokwenza iimpazamo zakho ngokubona upelo oluchanekileyo. Nangona ubugcisa bokubhala bebukho ebomini bethu njengenye yezona zixhobo zonxibelelwano ezisebenzayo kwiminyaka emininzi, indawo yethu, esisikhokelo sopelo, ngokuqinisekileyo iya kukunceda.
Unokukhetha upelo oluchanekileyo lwamagama ngolwimi lwakho kunye nolwimi olukhethiweyo kwindawo yethu, kwaye uyayibona indlela ebhalwe ngayo ngeyona ndlela ichanekileyo ngokuchwetheza igama onomdla kulo kwiqhosha lethu lokukhangela. Indawo yethu ityelelwa ngamawaka abantu yonke imihla ngemithetho echanekileyo yopelo, ukubhala njani Siyaqhubeka nokukhusela nokusebenzisa ulwimi lwethu ngoku ngokwemigaqo.